Riifaramdamii Kaataalooniyaa: Bilisummaan naannichaa 'guyyoota muraasa keessatti' - BBC News Afaan Oromoo
Kaataalooniyaan guyyoota muraasa keessatti Isipeen irraa bilisa bahuushee akka ibsitu, ogganaan naannoo ofi dandeessee BBC'tti himaniiru.
Erga riifarandamii Dilbata darbeetiin as Kaarlas Pujiidamoon motummaan isaa 'dhuma torban kanaa ykn jalqaba torban dhufuutti' tarkaanfii ni fudhata jedheera.
Haaluma walfakkaatunis, Mootiin Isipeen Feelipe VI qindeessitoonni keenniinsa sagalee 'seeraan ala ofi taasisaniiru' jedheera.
Haalli Isipeen keessaa 'baayyee cimaadha' jechuun tokkummaaf waamicha taasiseera.
Namoonni kuma heeddutti lakkaa'amanis gutuu Kaataalooniyaatti jeequmsa poolisoota Isipeen irratti hiriira taasisaa jiru. Jeequmsichaanis namoonni gara 900 hubamanii ture.
Akka ogeessoonni fayyaa biyyatti jedhanitti, tibba keenninsa sagaleetti poolisoonni 33 hubamanii jiru.
Osoo motummaan Isipeen jidduu galuun motummaa Kaataalooniyaa to'atee hoo jedhumuun gaaffii dhiyaateef, Mr Pujidamoni 'dogogoorraa waan hunda geedaru' ta'u danda'a jedheera.
Haasa'a Mootichi televisviiniin ummataaf taasiseenis, oggantoonni Kaataalooniyaa rifarandamicha qindeessanis 'tuffii humna motummaafa qaban' agarsiisaniiru jedheera.
''Olaantummaa seera dimokiraasiin jabsaniiru.''
Garuu Isipeen 'yeroo cimaa kan irra akka aantuu' cimsuun dubbataniiru.
Mootummaan giddu galaas riifarandamicha akka seeraan alaatti ibsee jira.
Wanta mootichi hinjedhiin
Gaazexessaa BBC Paatiriik Jaaksan Baarselonaa irraa
Erga haasawaan xumurameen, maamiltoonni mana dhugaatii giddu gala magaalattii barcuma walitti buusuun erga furucaniin booda garuma haasawa duraanii isaanitti deebii'aniiru, Mootii Feelipee kan dubbanne ta'a.
Goodayyaa suuraa Mootii Feeliipee VI biyyattii, tokkommaaf gaafatan
Dhimma inni osoo hindubbatiin hafeetu caalaa ariiseen. Waa'ee poolisootaan Dilbata darbee raawwatamee waan tokko hin jenne. Motummaa Kaataaloniyaa fi Isipeen jidduutti mariin akka taasifamuuf waamichi taasisee hinjiru. Fedhii dhugaa bilisummaaf, kenniinsa sagalee seeraan taasifamee asi jiruun beekamtii hin kennine akkasumas jecha tokko hinkaafne waa'ee isaa.
Bakka isaa garuu, ijjannoo motummaa ibse. Oggantoon Kaataalooniyaa seeraan ala ofi godhaniiru jedhee dubbate.
Qaamoolee lamaanuu gara mariitti akka dhufaniif dhiibuun carraa irra ce'ameedha, jedheera maamilli tokko haasawaan booda.
Kan biraa ammoo, 'kun gonkumaa haalaa jiruuf furmaata hinta'u. Yoo xinnaate jeequmsa guyyoota lamaan dura asi umamee turee caqasu qab ture,' jedheera.
Kaataalooniyaa gutuutti hirriirr guddaatu gaggeefamaa jira.
Baarseelonaatti qofa, namoonni 700,000 ta'aniitu daandiitti kan baha ta'u, dhaabbanni Ajaansi Firaansi Firee poolisii eeruun ibseera.
Kunis garuu oggantoota Maadiriidiin hin mirkanoofne.
Dilbata darbe, namoonni 2.2 olii riifarandamichaaf sagalee kennuu isaanii gabaafameera. Motummaan Kaataalooniyaas gargaarsi sagalee bilisummaa gara %99, garuu qabxiin seera qabeessi ganaa ifa hintaasifame jedhanii ture.
Baayyinni namoota garuu gara %42 akka tureefi ijjannoo Mr Puyigdeemont kan dadhabsiisu dha.
Abbootiin siyaasaas karaa ittiin bahan barbaachaa jiru.
Mr Puyigdeemoonti mootummaa Maadiriid waliin haala wal hubannaa haaraa akka barbaadu dubbateera. Garuu, mootummaan Isipeen akka inni atatammaan ofiin ofi danda'u dhiisuuf akeekachiise.
Goodayyaa suuraa Cufaatii daandii giddu gala Baarsooleenaa: Barreefamichis "humnoonni to'attaa arii'atamaniiru!"jedha